Voasambotry ny polisy tetsy Tsaralalana: teratany vahiny mpanondrana olona any ivelany | NewsMada
Voasambotra tetsy Tsaralalàna, ny 7 febroary lasa teo, ary efa naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora ity teratany vahiny iray, miampy lehilahy malagasy, voarohirohy ho mpanondrana vehivavy malagasy any Arabia Saodita.
Nidoboka eny amin’ny fonjan’Antanimora, ny asabotsy teo ny teratany vahiny iray voarohirohy ho isan’ny tompon’antoka amin’ny fanondranana olona mankany Arabia Saodita. Araka ny fanazavan’ny polisin’ny SES (sampandraharaha misahana ny fanadihadiana manokana eo anivon’ny polisim-pirenena) Anosy, olona roa izy ireo no voasambotra teny amin’ny faritra Analakely ny 7 febroary 2019 lasa teo noho ity resaka fanondranana olona mankany Arabia Saoditra ity. Tamin’io fotoana io, nahazo angom-baovao ny polisy miasa ao amin’ny SES Anosy fa eny amin’iny faritra Analakely iny no nisy ilay mpanondrana olona mihazo an’i Arabia Saodita. Natao ny vela-pandrika sy ny fanarahan-dia ka tovovavy iray no sarona teo am-panaovana fizaham-pahasalamana mialoha ny handehanana mihazo ity tany Arabo ity. Rehefa vita ny fizaham-pahasalamana dia nandeha nanatona olona iray tao amin’ny hotely iray eny Tsaralalana izay tokony handoa ny saran’izany izy izay mitentina 100 000 Ar. Rehefa tonga tao amin’ny hotely ilay vehivavy dia nivoaka ilay teratany vahiny nanome ilay vola ka nosamborin’ny polisin’ny SES avy hatrany. Nandritra ny fisavan’ny polisy ny efitranony, mbla nahitana antontan-taratasy fizaham-pahasalamana miisa 14 ary sarina tovovavy tao aminy.
Nahitana pasipaoro malagasy miisa dimy koa niaraka tamin’ireo antontan-taratasy ireo. Ireo antontan-taratasy sy pasipaoro ireo izay eo andalam-piondranana any Arabia Saodita. Fantatra nandritra ny famotorana nataon’ny polisy fa ny taona 2016 no efa nivezivezy teto Madagasikara ity terany vahiny ity ka nanangona sy nandefa ireo tovovavy any Arabia Saodita no tena anton-diany. Ankoatra ny fandraisany ireo tovovavy manodidina ny 23 taona amin’ny tambajotran-tserasera dia efa manana tambajotra miara-miasa aminy izy. Ny fomba fanaony, alefa any aminy mialoha any Arabia Saodita ny antontan-taratasy ka rehefa hitany fa mety dia mijery mivantana ilay olona eto Madagasikara izy. voasambotra niaraka taminy koa ny lehilahy iray mpiray tsikombakomba aminy.
Tsiahivina fa vao haingana ny teo anivon’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny no nanao antso avo tamin’ny alalan’ireo masoivoho toy ny any Chine, Arabia Saodita, Koweït, Liban amin’ny tokony hampodiana ireo tovovavy teratany malagasy miasa any amin’ireo firenena ireo izay iharan’ny herisetra sy ny tsindrihazolena ataon’ireo mpampiasa azy. Efa nisy ireo teratany Sinoa voasambotra momba ity resaka fanondranana olona ity nefa izao mbola misy teratany vahiny hafa indray voasaringotra amin’ity raharaha ity ihany. Efa mpivezivezy eto ity teratany vahiny ity, saingy malalaka hatrany ny lalany sy/na misy firaisana tsikombakomba ka izao vao tratra? Aiza ny fanaraha-maso ireny vahiny mivezivezy eto amintsika ireny?